Hebreo 9: 1-11
Hebreo 8 Hebreo 9 Hebreo 10
Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompoam-pivavahana, ary nisy ny fitoerany masina momba ny ety an-tany.
Fa nisy tabernakely voavoatra: ny efitra voalohany, ilay atao hoe 'ny fitoerana masina,' izay nisy ny mofo aseho.
Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny tabernakely izay atao hoe 'ny fitoerana masina indrindra,'
izay nisy lobia volamena fandoroana ditin-kazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena, izay voapetaka takela-bolamena avokoa; ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena, izay nitoeran'ny mana, sy ny tehin'i Arona izay nitsimoka, ary ny vato fisaky ny fanekena;
ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy ny voninahitra, izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana, -tsy atonay lazaina tsirairay ireo ankehitriny.
Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra mandrakariva ao amin'ny tabernakely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompoam-pivavahana.
Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisoronabe irery ihany indray mandeha isan-taona; ary izy aza dia tsy miditra, raha tsy mitondra ra, izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsi-fahalalana;
koa izany no anambaran'ny Fanahy Masina fa tsy mbola voaseho ny làlana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra, raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany;
fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny izao, ary araka izany no anaterana fanomezana fanatitra, izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana
(fa naman'ny zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samy hafa), dia fitsipika araka ny nofo, voatendry hatao mandra-pihavin'ny andro fanovana.
Fa Krisy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tebernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon-tànana, izany hoe, tsy isan'izao zavatra ary izao,